आरोप–प्रत्यारोपले गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
असार २४, २०७७ राजबहादुर शाही
मुगु — सोरु गाउँपालिकामा अध्यक्ष र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेपछि कामकाज ठप्प भएको छ । गाउँसभा छोडेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आरोप–प्रत्यारोपमा लागेका छन् ।
गत आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धान्‍ने बुढा र लेखापाल जेठबहादुर बुढाले अनियमितता गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । बुधबार कर्मचारीहरुका तर्फबाट पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ भने गाउँपालिकामा कार्यरत ६२ जनाले कार्यकारी अधिकृतको बचाउ गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् । जनप्रतिनिधि– कर्मचारी आरोप प्रत्यारोपकै कारण असार २४ गते तोकिएको गाउँसभा अनिश्चित बनेको छ ।
कर्मचारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गाउँपालिका अध्यक्षले उपभोक्ता समितिसँग घूस मागेको आरोप लगाइएको छ । अध्यक्ष शाहीले प्रशासनमा पेश गरेको उजुरीमा भने निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल बुढाले कोरोना राहत कोषको १९ लाख र गिलाह–तारापानी सडकको ९ लाख २१ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ । कर्मचारीकातर्फबाट परेको उजूरीमा अध्यक्ष शाहीले उपभोक्ता समितिसँग १५ लाख र कोरोना राहत कोषको ३ लाख रुपैयाँ घूस मागेको आरोप लगाइएको छ ।
निमित्त कार्यकारी अधिकृत बुढाले अध्यक्षले गलत आरोप लगाएर फसाउन खोजेको बताए । सबै कर्मचारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुढाको बचाउमा सदरमुकाम गमगढी गएपछि कामकाज ठप्प भएको अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘कर्मचारीको अनियमितताविरुद्ध उजुरी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘माथिल्ला तहका कर्मचारीको बचाउमा सबै कर्मचारी लागेपछि जनताले सास्ती पाएका छन् ।’
प्रकाशित : असार २४, २०७७ १७:२८
असार २४, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा बुधबार थप २ चिकित्सक र २ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आइसोलेसनमा ड्युटी गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । यसअघि पनि ९ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो ।
अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काका अनुसार संक्रमित हुनेमा २ जना चिकित्सक कोरोना विशेष अस्पतालमा दुईहप्ते ड्युटी सकेर क्वारेन्टाइनमा थिए । दुईजना स्वास्थ्यकर्मी भने ओपीडी र वार्डमा ड्युटीमा कार्यरत हुन् । संक्रमण देखिएपछि उनीहरुलाई अस्पतालकै आइसोलेसनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा यसअघि असार ११ गते २ चिकित्सकसहित ९ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोराना देखिएको थियो । उनीहरु आइतबार डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना विशेष अस्पतालमा ड्युटी गरिरहेकाहरु संक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । सुरुमा अस्पतालको फोकल पर्सन रहेका डा. केएन पौडेल र अर्का चिकित्सक याम शर्मा संक्रमित भएका थिए । अहिले विशेष अस्पतालको संयोजन डा. प्रदीप न्यौपानेले गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, बुधबार कर्णालीमा थप २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या १ हजार ५५० पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये १ हजार २ सय ९१ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भएको छ । आइसोलेसनमा २५३ जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले बताए ।
प्रकाशित : असार २४, २०७७ १७:२७